Wedding bouquet nke chrysanthemums
Wedding floristry bụ ihe dị mkpa ma dị mkpa oge na nkwadebe nke dum ememe. A sị ka e kwuwe, okooko ndị ahụ na-ejikọta ọnọdụ ịhụnanya na obi ọmịiko, ịdị ọhụrụ, ịlụ nwanyị. Ma, n'ezie, bridal bouquet nke na-alụ ọhụrụ na-emekarị ihe dị ka isi ihe na ezumike. Taa, ndị stylists na-enye ọtụtụ ngwọta. Ụdị nke mbụ ahụ dị iche, ọ bụghị nanị na ọdịdị, nha, agba, kamakwa na nhọrọ nke ụdị agba. N'ezie, ihe kachasị ewu ewu bụ mgbe niile roses. Otú ọ dị, nye ụmụ agbọghọ a ugbu a na-achọsi ike ịpụ apụ ma mesie ha ike, ndị florists na-enyekwa mpempe akwụkwọ dị iche iche na agba ndị ọzọ. Ma taa, otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu bụ agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ nke chrysanthemums.
Akara oriri agbamakwụkwọ nke chrysanthemums
Chrysanthemums na bouquet na-alụ ọhụrụ bụ ihe dị mfe ma n'otu oge ahụ na-edozi nwanyị n'ụzọ zuru ezu. A naghị ele ụdị okooko osisi ndị a anya dịka ndị na-adịghị mma ma na-egosipụtakwa, ma nhụsianya ha na ọmịiko ha aghọwo isi okwu. Na agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ nke oge a, nhọrọ dị ugbu a abughi naanị ihe ndị dị egwu nke àgwà ndị a dị ịtụnanya, kamakwa ndị a na-akpọ ndị dị iche iche. Ka anyị lee ihe oriri agbamakwụkwọ nke chrysanthemums kachasị ewu ewu?
Wedding bouquet nke ọcha chrysanthemums . Ihe kachasị mma nke onyinyo nwanyị dị nwayọọ bụ ihe ndị na-acha ọcha nke oge ochie. Ọtụtụ mgbe, ndị florists na-achịkwa ihe kacha mma na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-akwado bouquet na pearl, rhinestones, satin ribbons, nke na-emesi ike na ịhụnanya na ịdị mma nke ezumike.
Wedding bouquet nke Roses na chrysanthemums . Ọ bụrụ na ịchọrọ ka onyinyo gị dị iche, mgbe ahụ, ọ bara uru na-agbakwunye obere ndị na-agba ụta. N'okwu a, ihe ngwọta kwesịrị ekwesị ga-abụ nchikota nke charysanthemums na-acha ọcha. Ihe eji eme ihe ga-abụ nhọrọ, ma nke agba acha pastel, na nke dị iche iche na-acha uhie uhie, coral, ndo na-acha uhie uhie.
Wedding bouquet nke gerberas na chrysanthemums . Ụdị nchekasị, nke okike yiri nke dị iche iche, ga-agbakwunye ihe oyiyi niile. Gerberas na chrysanthemums bụ ezigbo ngwọta maka agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ.
Chrysanthemums na bouquet na okpokoro agbamakwụkwọ . Osisi okooko osisi a na-ewu ewu taa abughi nani maka mmekorita nke nwunye, kamakwa maka icho mma nke ememe ahu dum. Ya mere, a na-anọkarị na-eme ka ndị na-agba chara chaa chaa chara na tebụl, ụlọ nzukọ, njiko.
Uwe agbamakwụkwọ ejiji
Uwe eji edozi edozi isi - ihe kacha mma na ejiji ejiji
Bolero na uwe agbamakwụkwọ
Uwe maka ihe osise na ụlọ ọrụ ndekọ
Nwanyị na-akwa akwa maka agbamakwụkwọ ahụ
Agbamakwụkwọ maka brunettes
Mara mma agbamakwụkwọ Uwe - 52 foto nke kacha mma mgbanwe maka ọ bụla uto
Agbamakwụkwọ ejiji na okpueze
Uwe maka ụbọchị nke abụọ agbamakwụkwọ ahụ
Salad na ibe nduku
Ụmụ nwanyị nwere ụda ahụ
Mushrooms barns - ọma na ihe ọjọọ
Nwa Celine Dion malitere ọrụ ya dị ka onye na-agụ egwú!
Agba akpụkpọ ụkwụ na akwa ụkwụ
Esi esi esi nri ndị na-acha ọcha na poteto na anụ?
Ihe anwansi nke Voodoo maka inweta ego, ima na ochicho
Otu esi ahọrọ igwu mmiri site n'ụdị ụdị - ndụmọdụ bara uru maka ezigbo fashionistas
Egwuregwu ihe ọṅụṅụ n'oge okpomọkụ 2014
Salad na onyinye na ọkụkọ
Kedu esi eme envelopu maka diski?
Esi lelee protein maka mma?
Ndị na-emepụta ihe nlekota maka ụlọ
Akwa uwe nwa maka uwe
Ngwaahịa na-eme ka colic na ụmụ ọhụrụ
Drunk Jessica Simpson na ụbọchị ọmụmụ nke di ya
N'èzí ike nke oge: Cindy Crawford na Nicole Kidman wụsara Instagram foto na-enweghị anam-elu!
Kedu ihe ị ga - eyi uwe na - acha anụnụ anụnụ?